Jesus Fellowship Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Psalms 6
Nepali New Revised Version, Psalms 6
1 हे परमप्रभु, तपाईंको क्रोधमा मलाई नहप्‍काउनुहोस्‌, तपाईंको रोषमा मलाई ताड़ना नदिनुहोस्‌।
2 ममाथि दया गर्नुहोस्‌, हे परमप्रभु, किनभने म अति दुर्बल छु। हे परमप्रभु, मलाई निको पार्नुहोस्‌, किनकि मेरा हाड़हरूमा पीडा छ।
3 मेरो प्राण पनि साह्रै बेचैनीमा छ। कहिलेसम्‍म, हे परमप्रभु, कहिलेसम्‍म पर्खनु?
4 मतिर फर्कनुहोस्‌, हे परमप्रभु, मेरो प्राणलाई छुटकारा दिनुहोस्‌। तपाईंको अचूक कृपाको खातिर मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्‌।
5 मृत्‍युमा तपाईंको सम्‍झना हुँदैन, पातालमा कसले तपाईंको प्रशंसा गर्न सक्‍छ र?
6 आफ्‍नो आर्तनादले थाकेर म लाचार भएको छु, हरेक रात म रोएर मेरो ओछ्यान भिजाउँछु।
7 शोकले गर्दा मेरा आँखा धमिला भएका छन्‌। मेरा शत्रुहरूले गर्दा ती कमजोर भएका छन्‌।
8 हे सबै कुकर्मी हो, मबाट पर हट! किनकि म रोएको परमप्रभुले सुन्‍नुभएको छ।
9 परमप्रभुले कृपाको निम्‍ति मेरो पुकार सुन्‍नुभएको छ, मेरो प्रार्थना परमप्रभुले ग्रहण गर्नुहुन्‍छ।
10 मेरा सबै शत्रुहरू शर्ममा पर्नेछन्‌, र ज्‍यादै घबराउनेछन्‌, र पलभरमा लज्‍जित भएर पछि हट्‌नेछन्‌।
Psalms5Choose Book & Chapter Psalms 7